TERMS AND CONDITIONS OF BONUS SPINS THURSDAY | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! TERMS AND CONDITIONS OF BONUS SPINS THURSDAY | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
ဒီအမြှင့်တင်ရေး 4th အပေါ်တက်ကြွစွာပါလိမ့်မည်, 11ကြိမ်မြောက်, 18ကြိမ်မြောက်နှင့် 25 မေလ 2017 (BST).
အဆိုပါလှည့်ဖျားသာ Gonzo ရှာပုံတော်အပေါ် 10p တန်ဖိုးရှိနှင့်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 15 အဆိုပါမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းအတွင်းနေ့ရက်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ် Gonzo ရှာပုံတော်အပေါ် spins.
ယင်းလှည့်ခြင်းများကစားသမားကိုသက်ဝင်နိုင်ရန်အတွက် Gonzo ရှာပုံတော်ဖွင့်ရမယ်
အပိုဆုရန်ပုံငွေများ 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်သင့်ရဲ့သိုက်နှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုများ၏ပေါင်းလဒ်သယ်ဆောင် (e.g. £ 10 သိုက် + £ 10 ဆုကြေးငွေ * အသက် 30 = £ 600) ဆုကြေးငွေမတိုင်မီတွေ့ဆုံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်နှင့်ဆုကြေးငွေတစ်သိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောလျှင်မည်သည့်အနိုင်ရရှိတဲ့အဖြစ်သို့ငွေနှင့်ဤနှင့်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဖြစ်လာမဆိုထပ်မံအနိုင်ရရှိတဲ့ကူးပြောင်းနေကြသည်.
သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, ဂျက်နှင့် The Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, slot ဘုရင်, တောက်ခြင်း, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, မောင်း, Aloha, ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား, Nrvna, ဝက် Fly သောအခါ,, Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် Legends:ဧဒုံမြင်းစီး hood ကို, စစ်ဘုရင်များ:ပါဝါ၏ crystals, ခရစ္စမတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, Joker Pro ကို, တောတွင်းရိုင်း၏ဝိညာဉ်တော်သည်ခေါ်ဆိုခနှင့်တောရိုင်းရိုင်းအနောက်.
အပိုဆုခရက်ဒစ်ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့်အောက်ပါဂိမ်းများကိုအပေါ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း: Dracula, သေနတ် '' N ကို’ နှင်းဆီပန်း, လူးစ Hendrix, ဘုရားသခင့ Fortune မဂ္ဂဇင်း, အဆိုပါမမြင်နိုင်သောက Man, လီယိုပတ်ထ MegaJackpot, ဆိုက်ဘေးရီးယားမုန်တိုင်း Megajackpot, Megajackpots ကျွန်း O'Plenty, ဝံပုလွေ Run ကို Megajackpot, စတား Lantern Megajackpot, Gong Xi Fa Cai, ပိုများသောမျောက်များကြယ်ထီပေါက်, Genie ထီပေါက်, Winstar, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်, လင်းနို့လူသား, က Superman, အဆိုပါ Flash ကို, Green Lantern, Holly Madison နဲ့ညနေပိုင်း, Psycho, ဂျိမ်းစ်ဒင်း, အဆိုပါဝက် Wizard ကို, Thunderstruck II ကို, Avalon, ခရီးစဉ်အပေါ် Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ဘီး, ချန်ပီယံ Raceways, slot အိုရွှေ, စူပါတိုးတက်မှုနှုန်း, စူပါစိန် Deluxe
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 150,000 အခမဲ့လည် Giveaway